Daahfurka taxanaha Apple Wacth 7 ayaa dib loo dhigi karaa sababtuna tahay naqshadda cusub | Waxaan ka imid mac
Daahfurka taxanaha Apple Wacth 7 ayaa dib loo dhigi karaa sababtuna tahay naqshada cusub
Kuwo badan ayaa jiray oo waxay ahaayeen xanta ku saabsan bilaabista taxanaha cusub ee Apple Watch 7. Naqshad laba jibbaaran oo cusub oo waafaqsan naqshadda hadda ee iPhone 12, oo ka weyn 41 iyo 45 mm oo laga yaabo inay midab cusub leedahay. Si kastaba ha ahaatee, tani wax ka badan faa'iido, waxay u muuqataa inay dhibaato noqon karto. Sababtoo ah isbeddelkan naqshadeynta, imaanshaha suuqyada qaabkan cusub waxaa laga yaabaa inay dib u dhacdo.
Waxaa jira warar xan ah oo ay soo saartay Nikkei Asia taas oo niyad jab ku noqon karta kuwa naga sugaya Apple Watch -ka cusub. Iyagoo soo xiganaya ilo aqoon u leh wax soo saarka Apple Watch Series 7, warbaahintu tabinayso in qalabka dib loo qaabeeyey uu yahay dib -u -dhac ku keena wax -soo -saarka sidaas darteedna waxay dib u dhigi kartaa bilowga.
Soo -saarista Apple Watch -ka soo socda ayaa si weyn dib loogu dhigay sababo la xiriira naqshado adag oo loogu talagalay smartwatch -ka cusub, Nikkei Asia ayaa bartay. Kuwa sameeya Apple Watch 7, sida aaladda la filayo in loogu yeero, waxay bilaabeen wax-soo-saarka yar-yar toddobaadkii hore, laakiin waa la helay caqabadaha muhiimka ah si loo gaaro waxqabadka wax -soo -saarka qancin kara.
Ilo -wareedyada ayaa xusay in tayada wax -soo -saarka hadda ee niyad -jabka leh loo aanayn karo qaab -dhismeedka kakan, taas oo si weyn uga duwan jiilalkii hore ee daawashada, iyo shaqaaluhu waxay la kulmeen dhibaatooyin isku -dubbarididda modules elektiroonig ah, qaybo, iyo bandhigyo. Tan waa inaan ku darnaa xannibaadaha COVID ee laga yaabo inay soo baxaan.
Laakiin warka oo dhan ma xuma. Sida laga soo xigtay ilo isku mid ah, qaababka cusubi waxay la imaan doonaan howlaha softiweerka cusub ee la heli karo. Taasi waa, cabbiraadaha cadaadiska dhiigga. Laakiin sidoo kale hagaajinta qalabka. Waxaan u yeelan doonnaa ilaalin biyo oo dheeraad ah saacadda, taas oo macnaheedu noqon doono inaan ku dabbaalan karno si ka sii fiican sidii hore iyada oo gacanta lagu hayo.
Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay sababta qaarkeen ay awoodaan is taag iyo inkasta oo la soo bandhigo waqti isku mid ah iPhone -ka, haddana wuu imaan doonaa goor dambe. Wax kale oo badan ma aha laakiin waa ku filan in cidiyahaaga la qaniino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Daahfurka taxanaha Apple Wacth 7 ayaa dib loo dhigi karaa sababtuna tahay naqshada cusub
Raymond iyo Ray ayaa noqon doona magaca filimka cusub ee Apple TV +
Gurman wuxuu leeyahay Taxanaha Apple Watch 7 kuma dari doono Dareeraha Dhiigga